Ciidamada gumeysiga Ethiopia oo dhaq dhaqaaqyo military ka bilaabay deegaanka Kalabeyr ee waqooyiga magaalada Baladweyne. | JILYAALE_ONLINE
Ciidamada gumeysiga Ethiopia oo dhaq dhaqaaqyo military ka bilaabay deegaanka Kalabeyr ee waqooyiga magaalada Baladweyne.
Cutubyo ka tirsan ciidamada gumeysiga Ethiopia ayaa Maanta soo gaaray qeybo ka tirsan gobolka Hiiraan, isla markaana fariisin ka sameystay deegaanka Kala-beyr ee waqooyiga magaalada Baladweyne, isla markaana waxaa laga dareemay xoogagga Muqaawamada ee ku sugan magaalada Baladweyne in ay bilaabeen dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay uga hortagayaan ciidamada gumeysiga Ethiopia.
Dadweynaha ku dhaqan hareeraya fariisinka cusub ee ciidamada gumeysiga Ethiopia, ayaa ka walwalsan xaaladooda nabad gelyo, iyagoona muujinaya suurtogelnimada in waqti walba uu dhoco dagaal saameyn ku yeesha dadka rayidka ah.
Sarkaal ka tirsan xoogaga Muqaawamada oo ka hadlayey arintan soo noqoshada ciidamada gumeysiga Ethiopia ee qeybo ka tirsan gobolka Hiiraan, ayaa soo jeediyey in shacabka gobolka Hiiraan ay la dagaalamaan ciidamada gumeysiga Ethiopia.
Ma cada sababtay ku kaliftay in ciidamada Ethiopia ay dib ugu soo laabteen fariisimo ay hore uga guureen ee gudaha gobolka Hiiraan, xilli shacabka ay hada hayaan go’aankii Ethiopia ay ku sheegtay in ay kaga baxeyso gebi ahaanba gudaha Somalia.
Si kasta ha ahaatee arintan ayaa ku soo beegmaysa xili ay ciidamada gumeysiga Ethiopia si xoogan ugu soo qulqulayaan gudaha Soomaaliya isla markaana ay Isbahaysiga Dib u xoreynta Soomaaliya Garabka Djibouti iyo Dowladda KMG ah ku heshiiyeen in ciidamada gumeysiga Ethiopia ka baxaan gudaha dalka Soomaaliya balse aysan weli wax ka xirgalay jirin.
← Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay Bayaankii ay dhawaan soo saareen Culimada Musaalaxada iyo Sixida???.
Ciidamada gumeysiga Ethiopia oo dib ugu soo laabtay fariisinkii hore ay uga guureen ee gudaha degmada Yaaqshiid. →